४ ओटा जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य ९ % भन्दा बढीले वृद्धि
काठमाडौं । मंगलवार कारोबारको तेस्रो घण्टामा नेप्से परिसूचक ३ दशमलव २१ अंकले बढेर २ हजार ८२६ दशमलव २७ विन्दुमा पुगेको छ । शून्य दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको बजारमा २१४ ओटा कम्पनीको रू. ६ अर्ब ९४ करोड ३६ लाख ११ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारको तेस्रो घण्टामा बरुण हाइड्रोपावर, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल, घलेम्दी हाइड्रो र युनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । तेस्रो घण्टामा कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचकमध्ये बैंकिङ, होटल्स तथा पर्यटन, विकास बैंक, वित्त र अन्य समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी व्यापार, जलविद्युत्, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, जीवन बीमा, म्युचुअल फण्ड र लगानी समूहको परिसूचक बढेको छ ।
यस अवधिसम्म सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्को सर्वाधिक कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २४ करोड ६४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीको शेयरमूल्य रू. १ हजार ५८ मा कारोबार भइरहेको छ । कारोबार रकमकै आधारमा सर्वाधिक कारोबार हुने दोस्रो कम्पनीमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४१८ मा रू. २१ करोड ५९ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।